विश्वस्तरको विश्वविद्यालयका लागि स्वायत्तता - Karobar National Economic Daily
विश्वस्तरको विश्वविद्यालयका लागि स्वायत्तता
query_builderSeptember 1, 2017 1:10 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility789
अमत्र्य सेन प्राध्यापक हार्वर्ड विश्वविद्यालय । तस्विर : हिन्दुसतान टाइम्स
सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रका नोबल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेन विश्वप्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्स तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पनि प्राध्यापन गरिसकेका छन् ।
भारतको कोलकातामा प्रसिद्ध शान्ति निकेतनमा जन्मिएका उनका पिता आशुतोष सेन पनि ढाका विश्वविद्यालयमा रसायन शास्त्र पढाउँथे । लकाताको शान्ति निकेतन र प्रेसिडेन्सी कलेजबाट पढाइ समाप्त गरेपछि उनले क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा अध्यापन गरेका थिए । सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रको नोबल सम्मान पाएपछि भारत सरकारले पनि उनलाई सन् १९९९ मा भारत रत्नले सम्मानित गरेको थियो ।
पछिल्लो समय उनले भारत सरकारले लिएको अमौद्रीकरणको कदमलाई विरोध गरे । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो अमौद्रीकरणको कदममा अर्थशास्त्रीहरूले गरेको आलोचनाविरुद्ध खनिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, “कडा परिश्रम हार्वर्डभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।” उच्च दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई सेनले ‘तानाशाही कदम’ भएको बताएको अवस्थामा मोदीको यो टिप्पणी आएको थियो । नोबेल पुरस्कार विजेता सेनसँग हिन्दुस्तान टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादित सार :
हाल भारतमा अन्य संस्थाहरूले आफ्नो स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा त्रासको अवस्था सामना गरेका छन् । हामीले यसलाई कसरी हेरेका छौं ?
यो संवेदनशील विषय हो । किन भारतमा चीन, कोरिया र अन्य धेरै मुलुकमा जस्तै विश्वस्तरका विश्वविद्यालय छैनन् ? यसको एउटा कारणमा भारतमा विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन, जसले उनीहरूलाई उनीहरूले सक्ने खालको काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।
नालन्दा छैटौं शताब्दीदेखि धेरै कालखण्डसम्म उच्च शिक्षाको एउटा प्राचीन केन्द्र थियो । यसलाई पुनः सुरु गरिएको थियो । मैले प्रस्तावित नालन्दा विश्वविद्यालय (एनयू) को प्रथम चान्सलरका रूपमा काम गरेँ ।
सन् २०१४ अगस्टदेखि यस विश्वविद्यालयमा अध्यापन कार्य पनि सुरु भयो । तर, विविध कारणवश दोस्रो कार्यकालका लागि मैले रुचि देखाइनँ र मैले यसका लागि नालन्दामा गरेको सानो प्रयासको पनि दुःखद अन्त्य भयो ।
तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सबै प्रकारका स्वायत्तताका साथ विश्वस्तरको विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् नि ?
स्वायत्तताको कुरा नगर्नुस् । किनभने उनीहरूलाई स्वायत्तता भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन । म ट्रिनिटी कलेजको प्रमुख भएको थिएँ, जसले विश्वका अन्य कुनै पनि कलेजको तुलनामा धेरै काम गरेको छ । यसलाई सरकारले सञ्चालन गरेको होइन ।
यो स्वायत्त रूपमा सञ्चालन भएको थियो । वास्तवमै शिक्षकका रूपमा कुनै व्यक्तिले मलाई हटाउन पनि सक्थ्यो, ऊ मेरो साथी हो । उसलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ । उसले अविश्वासको बहुमतका आधारमा मलाई हटाउन पनि सक्थ्यो, ऊ मेरो साथी हो । यो स्वायत्तता हो । तपार्इंलाई हटाउनका लागि निर्णय गर्ने व्यक्ति कुनै मन्त्रालय वा मन्त्री नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । किनकि हामी स्वायत्तता चाहन्छौं ।
तपार्इं स्वायत्तताका साथ सही काम गरिरहनुभएको छ र पनि तपाईंले विश्वविद्यालय छोड्नुपर्छ भने त्यो स्वायत्तता होइन । हामी स्वायत्तता चाहन्छौं । यो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वायत्त तरिका होइन ।
सरकार र यसका नेताहरूलाई आरोप लगाउनु सजिलो कुरा हो । तर, भारतमा विश्वविद्यालय व्यवस्थाको निर्माण असफल भइसकेको छ नि ?
यसमा मेरो असहमति छ । सरकारको आलोचना गर्नु त्यति सजिलो छैन । मानिसहरू वास्तवमै त्रसित भएका छन् । यो मैले मानिसहरूमाझ देखेको छु । हैदरावाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय र जोधपुरमा जे भयो त्यसपछि मानिसहरू डराएका छन् । त्यसैले यो भन्न सजिलो छैन ।
भारतका कुलिन वर्गहरूले भारतको शिक्षामा लगानी नगरी आफ्ना बालबालिकालाई पढ्नका लागि विदेश पठाएको कुरा पनि यथार्थ हो नि ?
उनीहरू आफ्ना बालबालिकाले आफूले चाहेको उत्तम शिक्षा प्राप्त गरून् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूले यो भारतमा पाउँदैनन् । तर, यसले पनि समस्याको समाधान गर्दैन । यदि तपार्इं यसलाई पुनः निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ र नालन्दा विश्वविद्यालयमा मैले त्यो चाहेको पनि थिएँ, तर यो हुन सकेन ।
यो मेरो जीवनकालमा हुने पनि छैन । आशा गरौं, यो अन्य नेतृत्वमा कुनै समयमा हुन सक्छ । मैले केही कुराको निर्माण गर्ने आशा गरेको छु । जुन प्राचीन नालन्दामा थियो र त्यो स्वायत्त पनि थियो । त्यसैले मानिसहरूले त्यहाँ जाने विषयलाई रोज्दै आएका थिए ।
के कुराले अभिभावकलाई निर्णय गर्न प्रेरित गर्छ र यो उनीहरूका बालबालिकाका लागि उत्तम हुन्छ भन्नेबारेमा हामीले सोच्नुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ ।
तपाईं आफ्नो पुस्तकमा महŒव दिएका विषयहरू पूरा गराउन कसरी जानकारीमूलक सुसूचित बहस गराउन सक्नुहुन्छ ?
हामी यी प्रश्नमा ध्यानाकर्षण गराउन र छलफल गराउन सक्छौं । १८ औं शताब्दीको समयमा सार्वजनिक बहसको विषय व्यापक थियो । उक्त समयमा आदम स्मिथ, डेभिड हुमे, मेरी उल्टोनेक्राफ्टले यो विषयमा बहस गरेका थिए ।
उनीहरू पायोनियर महिलावादी र सम्भवतः बोधित्व प्राप्त गरेका सर्वाधिक कम आँकिएका व्यक्तिहरू थिए । उनीहरू सार्वजनिक बहसको विषयमा इच्छुक थिए र उनीहरूपछि जोन स्टुवार्ट देखा परे ।
उनीहरू सबैलाई प्रजातन्त्रका बारेमा हाम्रो सोचमा एकीकृत गर्न सकिन्छ । यदि विश्लेषणात्मक र गणितीय जटिलता देखा प¥यो भने यसको पनि समाधान गर्नुपर्छ । यो मेरो पुस्तकमा पनि समावेश गरिएको छ ।
१९७० को तपाईंको कामलाई विस्तार गर्ने निर्णयमा के कुराले प्रभाव पा¥यो ? यो तपाईंको नयाँ पुस्तकमा कसरी प्रतिविम्बित भयो ?
आफ्नै मुलुक भारतलाई हेर्ने हो भने राज्य र सरकारबीचको विभेद स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिँदैन । सरकारले सधैँ नै निर्णय लिने गर्छ । यसले पैसाको स्वामित्व लिँदैन, तर पैसामाथि सरकारको नियन्त्रण रहँदै आएको छ ।
यो सरकारको इच्छाअनुसार केही गर्नका लागि प्रायः प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक बहसमा मोदीको अमौद्रीकरणको निर्णयलाई विनाशकारी भनिँदै आएको छ । यसले केही मानिसलाई आतंकित नै बनायो । यसले कहिलेकाहीं विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र अनुसन्धान र काम गर्ने अवस्थालाई अस्वीकार पनि गरेको छ ।
विश्वविद्यालयलाई सरकारले वित्तीय सहयोग गर्ने भएकाले यी संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा बोझको अवस्था पनि सिर्जना भयो । उनीहरू सरकारमा बिडिङ गर्ने अवस्थामा रहेनन् । उनीहरू देशका लागि के राम्रो हुन्छ त्यो गर्ने गर्छन् ।
अर्को कुरा, मतदान प्रक्रियाको जटिलता कम बुझिएको विषय भएको छ । मेरो अर्थ के हो भने धेरैजसो सरकार अल्पमतका छन् । भारतीय जनता पार्टीले पूरा मतको ३१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको छ । गठबन्धनसहित उनीहरूले ३९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् ।
यो पनि अल्पमत नै हो । बहुमत भए पनि यो राष्ट्रविरोधी भएकाले हामी तपाईंलाई तपाईंको धारणाको अभिव्यक्ति गर्न दिँदैनौं भन्न पनि मुस्किल छ । अल्पसंख्यकको मामिलामा यो विशेष गरी हास्यास्पद हुनेछ र किन हामी बहुमत र लोकप्रियतामा विभेद गर्दै छौं भन्ने सवाल खडा हुनेछ ।
यो कतै प्रक्रिया अगाडि बढाउने राम्रो तरिका हो भने यो हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक अर्को कुरा पनि हो । यहाँ यस प्रकारका विषयहरू छन् । यो मैले १९६० को दशकमा उपलब्ध गराउन सक्षम भएको भन्दा गहन विश्लेषणको आवश्यकता छ ।
सिटसंख्याको मामिलामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१४ को निर्वाचनमा व्यापक जित हात पारेका छन् । मतका आधारमा होइन । लोकप्रियताको शासन र बहुमतको जितको बीच भिन्नता छुट्ट्याउनका लागि तपाईंले यो अंशलाई उदाहरण दिनुभएको छ । लोकप्रियताको शासनको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न के आवश्यक छ ?
यो बारेमा सोच्ने दुई तरिका छन्, जुन कुरा मैले आत्मसात् गरेको छु र जुन महŒवाकांक्षी पनि छ । नामै लिनुपर्दा हामी कसरी मतदानको प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं भन्ने हो । मेरा साथी नोबेल पुरस्कार पनि जितेका अर्थशास्त्री इरिक मास्किनले कसरी डोनाल्ड ट्रम्पले १७ रिपब्लिकन प्राइमरी हारेका छन् र आमने–सामनेको प्रतिस्पर्धामा ट्रम्पलाई पराजित गर्न सक्ने अन्य केही उम्मेदवारका बारेमा लेखेका छन् ।
यी निर्वाचन भएको तरिकामा केही गलत देखिएको छ । प्राइमरी र अमेरिकी कंग्रेसका लागि हामीले केही फरक सुझाव पेस गरेका छौं । त्यो गरिन्छ वा गरिँदैन भन्ने विषय हामीलाई थाहा छैन । तर, अहिले कम्तीमा पनि छलफल भएको छ ।
भारतमा पनि हामी गर्न सक्छौं । हामी बेलायती व्यवस्था औपनिवेशिक मोडललाई पछ्याउन सक्छौं, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रमा जसले धेरै संख्यामा मत पाउँछ उसलाई नै विजेता घोषणा गरिनेछ । यो बहुमत विजयी होइन । लोकप्रिय विजेता हो । हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
तपाईंले भनेजस्तै निर्वाचन मण्डलका बारेमा प्रशस्त चर्चा भएका छन् । हामीले हालै मात्र स्वतन्त्रताको ७० वर्ष पूरा गरेका छौं । तपाईंले भने झै परिवर्तन गर्नका लागि आग्रह गर्न यो उत्तम समय हुँदैन र ?
भारतको ७० औं स्वतन्त्रता दिवस सम्झाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ । हामी स्वतन्त्र भएका बेला संविधानसभा पनि थियो । जहाँ हामीले खुला दिमागबाट राम्रो छलफल गर्ने अवसर पायौं, त्यहाँ हामीले यो बारेमा सोचेका प्रशस्त कुरा थिए । तर, हामीले त्यसो गरेनौं । हामीसँग अम्बेडकर थिए । यो सम्भवतः संविधान निर्माणका लागि सर्वाधिक महŒवपूर्ण आवाज थियो ।
उनले भनेका थिए– हामी यहाँ प्रशस्त विवाद छोड्दै छौं । हामी व्यापक सामाजिक र आर्थिक असमानताका साथ समाजमा राजनीतिक समानता प्राप्त गर्दै छौ, जसलाई हामीले पुनः परीक्षण गर्न आवश्यक छ । यो विषय बाँकी नै छ । ७० वर्षपछाडि फर्केर हेर्ने हो भने यो विषयलाई पुनः अवलोकन गर्न आवश्यक छ ।
यो हालको सरकारको मामिलामा मात्रै होइन, विगतका सरकार पनि अल्पसंख्यक थिए । उनीहरूले आफू बहुमतको सरकार भएको भनेर ढाँट्दै आएका थिए । यो मुद्दाको विषय होइन । राज्यमा अदालत, मिडिया, जनधारणालगायतका विषय समावेश हुन्छ, जसलाई तपाईं दबाउन सक्नुहुन्न ।
विश्वविद्यालयको जागिर भएका कोहीलाई जागिरबाट निकाल्नु सबैभन्दा नराम्रो काम हो, जसमा जो–कोहीले पनि विश्वविद्यालय परिषद्, चान्सलर तथा सरकारका तर्फबाट पृथक् धारणाहरू अभिव्यक्त गर्छन् ।
यीमध्ये तपाईंले उठाएका केही मुद्दाका बारेमा हालको सरकारको कुन कुराले तपाईंलाई बढी प्रभावित पा¥यो ?
मुख्य कुरा, अनुमति दिने र असहमतिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । एउटा सरकार राज्य होइन, हामी के कुराका बारेमा छलफल गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई छैन । कास्मिर पनि छलफलको विषय भएको छ ।
अन्ततः हामी प्रजातन्त्र हौं । हाम्रो छिमेकी पाकिस्तानजस्तो सेनाबाट सञ्चालित नभएकोमा हामी भाग्यमानी सावित भएका छौं । त्यसो भए हामी प्रजातन्त्रका लागि केको प्रयोग गरिरहेका छौं ? यो घटना कनैया कुमारसँग भएको छ । उनीहरू कास्मिरका बारेमा छलफल गरिरहेका थिएनन् । उनीहरू अन्य केही कुराका बारेमा छलफल गरिरहेका थिए ।
दुःखको कुरा, त्यहाँ केही तोडमोड भएको थियो । सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा उनीहरू नियतवश विषयलाई तोडमोड गरिरहेका थिए । जो मानिसले यो तोडमोड गरे उनीहरूलाई अझैसम्म पनि पुस्तकमा समावेश गरिएको छैन । त्यसपछि बालकलाई पक्राउ गरियो । जो बिलकुलै बालक थियो, उसलाई हिरासतमै कुटपिट गरियो ।
तपाईंले हार्वर्ड, ट्रिनिटीजस्ता विश्वविद्यालय र कलेजका बारेमा, प्रत्यक्ष बहसका बारेमा लेख्नुभएको छ । उनीहरूले कसरी नीतिगत निर्णय गर्ने गरेका छन् । के यो अवस्था हामीले भारतमा देखेका छैनौं ?
ठीकै छ, यदि तपाईंले अवसर दिनुभयो भने यो अवस्था पनि आउँछ । म दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्समा पढाउँदै थिएँ र हाम्रा विद्यार्थी र संकायबीच प्रशस्त छलफल हुने गथ्र्याे । हामीबीच भिन्नता पनि थियो ।
सीडी देशमुखलाई भाइस चान्सलरका रूपमा पाउनु र सहनशील सरकार पाउनु पनि हाम्रा लागि सौभाग्य थियो । हामीले प्रशस्त मात्रामा विभागहरूको निर्माण ग¥यौं । भारतमा यसलाई रोक्ने हामी पहिलो भयौं । त्यहाँका केही विद्यार्थी हाल शिक्षाविद्, राजनीतिक अर्थतन्त्रका ठूला व्यक्तित्व भएका छन् । तर, उनीहरू चुप लागेर बसेका पनि छैनन् । उनीहरू अवसर पाउनासाथ प्रत्यक्ष बहसमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
त्यो अवसर त्यति लामो समय टिकेन । देशका हालका नेताहरूका लागि तपाईंको सन्देश के हुन सक्छ ?
जब मलाई केही भन्नु छ त म हालका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दिनँ । म जनतालाई सम्बोधन गर्छु । प्रजातन्त्र भनेको जे पनि हुन सक्छ भने यो परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ र यो विषयमा जनतासँग पूर्ण रूपमा कुरा गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रविरोधी भएको आरोपमा जनतालाई पक्राउ गरिनु हुँदैन । यो प्रजातन्त्र मात्रै होइन कि यो मुटु र आत्मा पनि हो । यो आधुनिक विश्वमा सफल जीवनयापनको सूत्र पनि हो ।
(अनुवाद : समीर रेग्मी)
भारत अर्थशास्त्र नोबल पुरस्कार विजेता हार्वर्ड विश्वविद्यालय